Chivabvu 16, 2022
Bucks Mine, pedyo neGwanda
Vanhu vasere vanonzi vakafa mushure mekunge tambo yadimbuka vachibva vadonhera mumugodhi kuBucks Mine, Colleen Bawn, Gwanda uye pave nehurongwa hwekuyedza kuburitsa mitumbi yavo.
Mutori wenhau weStudio 7 aenda kumugodhi uyu anoti vari kubatsira vari kuona mitezo yakadamburwa damburwa uye ropa. Vaanhu ava vakadonhera mumugodhi rakadzika mamita mazana maviri nemusi weMugovera.
Mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa VaPolite Kambamura vaudza vatori venhau kuti hurongwa hwekuyedza kuburitsa mitumbi huri kuenderera mberi huchitungamirwa nebazi ravo uye vamwe vabva kumugodhi weVumbachikwe.
Mugodhi uyu waimbenge wamira kucherwa asi ukatanga mwedzi wapera. Mukuru wesangano reNational Mine Workers Union, VaNomboka Jabangwe vaudza Studio 7 kuti mune mimwe migodhi hamuna zvekushandisa zvinotarisirwa zvinozoguma zvoisa hupenyu hwevanhu munjodzi.
Mashoko aya astinhirwao nemukuru wesangano reCentre for Natural Resource Governance VaFarai Maguwu vatiwo mamwe makambani achiri kusimukira anoisa hupenhyu hwevanhu munjodzi nekuita basa vasina ruzivo rwakakwana.